कुन राशीका व्यक्तिले कस्तो यौन चाहना राख्छन् ? जानी राखौ !! – Rastriyapatrika
कुन राशीका व्यक्तिले कस्तो यौन चाहना राख्छन् ? जानी राखौ !!
सबै मानिसको यौन ब्यवहार फरक फरक हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रले पनि मानिसको सौख र ब्यवहार राशी अनुसार नै फरक हुने गरेको बताउछन्। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशी भएका व्यक्तिले कस्तो यौन व्यवहार गर्छन ? त्यसबारेमा जानिराखौँ केही कुराहरु :
मेष राशी – यस राशीका ब्यक्तिहरुमा कामबासनाको भावना धेरै हुन्छ। लामो समयसम्म यौनसम्पर्क गर्न यिनीहरु रुचाउँछन। कम समयमा नै प्रेमको भरपुर रोमान्स उठाउन चाहन्छन। यौनसम्पर्कको समयमा छिटै आवेशमा आउँछन। यस कारण यो राशीका मानिससँग मन बचन संयम राख्नुपर्छ।
बृष राशी – यस राशीका मानिस बुद्धि विवेक भएका हुन्छन्। छिटै आवेशमा आउदैनन्। चुम्वन गर्न मन पराउँनछन्। यौनसम्पर्क गर्नुभन्दा पहिला साथीलाई एकदम माया गर्छन। यीनीहरु प्रेमको पहल गर्न बढी जोड गर्छन।
मिथुन राशी – यीनीहरु काम बासनाको भावना बढी हुन्छ। यीनीहरु त्यसका लागी छिटै आवेशमा आउँछन्। यौनसम्पर्कको दौरानमा कुराकानी गर्न मन पराउँछन्। साथीसँग तालमेल गर्न बढी होसीयारी हुन्छन्।
कर्कट राशी – यस राशीका मानिस भावुक र संवेदनशिल पनि हुन्छन। यस कारण यीनीहरु यौन सुख उठाउने मामिलामा पछाडी रहन्छन। यीनीहरु आफनो साथीको खुसी भन्दा पनि आफ्नो खुसीलाई बढी ध्यान दिन्छन्। यीनीहरुको बैवाहिक जीवनमा प्रेम र आनन्द कमी हुन्छ। कहिलेकाही प्रेम प्रति बढी उत्साहित पनि हुन्छन।
सिंह राशी – यस राशीका मानिस स्थिर बुद्धी हुन्छन्। प्रेमप्रति आफ्नो भावनाको छिटो ब्यत्त गर्दैनन्। यौन क्रिडाको दौरानमा धेरै उर्जावान जोसिला रहन्छन। जोश र उत्साहका कारण आफ्नो यौन साथीलाई दुख भएको छ की भनेर हेक्का पनि राख्दैनन्।
कन्या राशी – यस राशीका मानिस लज्जालु हुन्छन्। प्रेमप्रति आफ्नो चाहना छिटो दर्शाउदैनन्। यौनमा बिषयमा भने खुव रुची राख्छन्। यौनसम्पर्क गरिरहेको बेला बातचित गर्न मन पराउदैनन्। यिनीहरु जोलाई प्रेम गरेका हुन्छन तिनिहरु प्रति इमान्दार रहन्छन। यिनीहरु स्वाभाव मुडी हुन्छन।
तुला राशी – यस राशीका मानिस आफ्नो साथी राख्न सक्छन। प्रेम सम्बन्धका लागी कहिल्यै दबाव दिदैनन्। साथीको इच्छामा नै अगाडी बढाउछन्। यस राशीका मानिस छिटो नै आक्रशित गर्ने खालका हुन्छन। यौनसम्पर्क राख्ने दौरानमा बातचित गर्न मन पराउछन्।
बृषिक राशी – यो राशीका मानिसमा काम बासनाको भावना धेरै हुन्छ। यो राशीका मानिसको उत्साह र ब्यबहारले यौन साथी हैरान हुन्छन। प्रेमको मामिलामा अति भावुक हुन्छन्।
धनु राशी – यस राशीका मानिस सधै भरी प्रेम सम्बन्धका लागी तयार रहन्छन्। प्रेम र आनन्दपूर्ण जीवन प्रति बढी उत्साहित हुन्छन्। यौन सम्बन्धका बेला चुम्वन र कुराकानी गर्न मन पराउदैनन्।
मकर राशी – यस राशीका मानिस प्रेम प्रति धेरै गम्भीर हुन्छन्। आफ्ना यौन साथी प्रति नै सर्मपित हुन्छन्। यस कारण यो राशीका मानिस प्रेमका लागी धेरै भरोसा गर्न लायक हुन्छन्। यो राशीका मानिसहरु चुम्वन गर्न बढी मन पराउँछन्।
कुम्भ राशी – यो राशीका मानिस यौनसम्पर्क बेला धेरै उत्साहित हुन्छन्। नयाँ नयाँ आशनमा यौनसम्पर्क गर्न रुचाउँछन। त्यो बेला उताउति बातचित गर्न यिनीहरु मन पराउदैन् । यीनीहरु साथीको भन्दा आफुलाई बढी ध्यान दिन्छन।
मिन राशी – यीनीहरु आफ्नो यौन साथीको खुव ध्यान दिन्छन्। यीनीहरु पनि धनु राशी जस्तै प्रेम प्रति धेरै उत्सुक हुन्छन्। यीनीहरु कुम्भ राशी जस्तै यौनसम्पर्क बेला अलग अलग आसनमा यौन गर्न इच्छा राख्छन। यो राशीका मानिसलाई साथी बनाउदा धेरै सुखद एंव आनन्दमय जीवन हुन्छ।